Baydhabo Ha Kala Doorato Laba Maamul Midkood « AYAAMO TV
Baydhabo Ha Kala Doorato Laba Maamul Midkood
633 Views Date March 20th, 2014 time 7:29 am
Dowladaha ka abuurma gobolada dalka oo salka ku haya qabiilka kama turjumayaan nidaam wanaagsan oo shacabka degaanka iyo Soomaalida kale ku maamula xaqsoor ay u siman yihiin xuquuqda wada noolaashaha ka dhexeysa Soomaalida ku dhalasho tirsata degaanada kala duwan.
Baydhabo uma haboona iney beelaha ku hadla afka Mayga ay hal maamul isugu keenaan, taas oo u muuqata laablakac aan run loo rogi karin. Muqdisho dadka maanta ugu tirada badan oo ku nool waxey ka soo qaxeen Jubada Sare oo intooda badan si rasmiya uga mid noqday shacabka Muqdisho. Sidaas ayeysan maangal ku ahayn in dhamaan dadka ku hadla afka Mayga iyo degaanada ay Soomaalida kale la wadaagaan in laga wada xukumo Baydhabo
Muqdisho waa caasimada Soomaalida, waana magaalada ay degen yihiin Soomaalida ugu tirada badan oo ka kala yimid dhamaan gobolada dalka, waxeyna hooy u tahay dowlada dhexe oo xaruumahooda waaweyn ay ku yaalaan, waxaana sidoo kale magan u ah shisheeyaha ugu badan ee ku nool dalka iyo wakiilada hayadaha caalamka iyo diblomaasiyiintaba. Sida addunka oo dhan laga yaqaano, magaalo madaxda dal waa in qiyaasta 200 km dhulka ku wareegsan ay maamul ahaan hoos yimaadan caasimada si difaaca cirka, dhulka iyo bada uu u noqdo mid amaankoodu sugan yahay,maamulkooduna hal meel ku mideysan yahay.
Madaxda u soo baxday shacabka ku nool waqooyi galbeed(Somaliland), waqooyi bari(Puntland), iyo Muqdisho waa kuwo lagu soo xushay aqoontooda, lagana sugayo garasho badan iney wax ku maamulaan. Baydhabo waxey talo raacday Kismaayo oo si dirqisa uu madax uga noqday hogaamiye beeleed aan waxba ka fahamsaneyn dhaqanka maamulka. Rajada Soomaalida ayaa salka ku haysa in madaxda aqoonyahanka ah inay dalka guud ahaan ka curiyaan isbedel looga guurayo maamulxumadii dalka soo martay,ayna yihiin kuwo ay sareyso tayada ay ku geli karaan wada hadalka ay la yeelan karaan madaxda kale ee Soomaalida oo ay kawada dhaxeyso danta guud ee dalka.
Xisbiga Dadka wuxuu u soo jeedinayaa shacabka Bay iyo Bakool iney ka fiirsadaan halista ay wataan shaqsiyaadka ku tiirsan danaha deriska iyo kuwa aan cilmiga u lahayn maamul wanaaga dowladnimada. Xiliogii gumeysiga, Talyaaniga oo daneynayey dhulka beeraha haddii uu ku guuleysan lahaa inuu 6 malyan dejiyo dhulka u dhexeeya labada webi, 30 sannana uu sii xukumo Soomaaliya, ma suurtowdeen odayaashii Talyaaniga taageersana dhulka ay doonayeen in Soomaalida gooni ay ugala cararaan iney calfan lahayeen. Ineysan sidaas dhicin waxaa abaalkeeda lahaa oo mutay in lagu qadariyo waxey ahayeen waxgaradkii gobonimadoonka ka soo kala jeedey dhamaan gobolada Soomaalida oo fahmey dhagartaas, kana soo horjeestey dhaqan galka fikirkaas lagu dhaxal wareejinayo milkiyada dhulka u dhexeeya labada webi. Sidaas oo kale hadda waxaa la mida fikirka ay xambaarsan yihiin shaqsiyaadka taageersan danaha Itoobiya iyo Kenya oo ay hubaal tahay iney u gacan gelinayaan wadamadaas ayaaha mustaqbalka dhul xeebeedka koofureed haddii Itoobiya iyo kenya raga ay wataan aan laga hortagin, kuwaas oo ujeedadoodu ay tahay iney dano shaqsiyadeed ku bedeshaan iney ku dhaxal wareejiyaan jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka dhow soo kacaya.